I-3-Amino-1, 2, 4-Triazole
I-3-Amino-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid
I-3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole
Izidingo zokusetshenziswa okuphephile nokugcinwa kwe-aminoguanidine hydrochloride
Izidingo zokusetshenziswa okuphephile Naka ukuphepha lapho usebenzisa i-aminoguanidine hydrochloride, ngoba iyikhemikhali enobuthi. Uma kunenkinga yokuphepha, ingahle ilahlekelwe ngokungenakulinganiswa. Okulandelayo yizidingo zokusetshenziswa okuphephile. ...
Izakhiwo zamakhemikhali nokusetshenziswa kwe-p-hydroxybenzaldehyde
Izici zamakhemikhali ze-p-hydroxybenzaldehyde P-hydroxybenzaldehyde zisetshenziswe ngempumelelo kwezokwelapha, izimonyo, ukudla nakweminye imikhakha, futhi uhla lwazo lokusebenza lusakhula. Uma ufuna ukunikeza ukudlala okugcwele ekusebenzeni kwayo ...
Imiyalo yokusebenza nokugcina i-aminoguanidine bicarbonate
I-Aminoguanidine bicarbonate iyikhemikhali enobuthi, ngakho-ke inezidingo ezikhethekile kwisitoreji esijwayelekile. Kuyadingeka ukuzigcina ukuqinisekisa ukuphepha kwemikhiqizo nabasebenzi. Nazi ezinye izindlela zokuqapha okufanele uziqaphele. 1 ...
Umgwaqo we-Weier, iGulang County Industrial Concentration Area, eTuwei, esifundazweni saseGansu